အကောင့်မျိုးစုံ - Android အတွက် Parallel App APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အကွိမျမြားစှာ Accounts ကို: စင်ပြိုင် App ကို
အကွိမျမြားစှာ Accounts ကို: စင်ပြိုင် App ကို APK ကို
Whatsapp ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုအထောက်အပံ့: WhatsApp ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဿုံယခုဒီ app ကထောက်ခံထားတဲ့သာ 64-bit နဲ့ format ကိုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, မသာ Whatsapp အခြား 64-bit မှာ apps များကိုလည်းဿုံထောက်ခံနေကြသည်။
တဦးတည်းကို Mobile Device ကို, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဒုတိယအအကောင့်ရှိသည်ဖို့လိုသလား?
နှစ်ဦးစာတိုပေးပို့ရေးအကောင့်အများရှိသော်လည်း, ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အသစ်များ၏မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်နှင့်ထွက် logging ငြီးငွေ့?
အခုတော့အကွိမျမြားစှာ Accounts ကို (2Account) သင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်မှမရရှိနိုင်ပါ!
"အကွိမျမြားစှာ Accounts ကို" သင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အသစ်များ၏မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အချက်အလက် seperated အာကာသအတွင်းရှိနေစဉ်, သာတစ်ခုမှာဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာအွန်လိုင်းတစ်ခုမှာ App ကိုနှစ်ဦးစလုံး၏နှစ်ဦး Accounts ကိုသိမ်းထားချင်သူအအသုံးပြုသူများအဘို့ဖြစ်၏။
★တစ်ခုမှာ app ကိုနှစ်ဦး Accounts ကို, Messaging နှင့်လူမှုကွန်ယက်:
ပံ့ပိုးမှုအများဆုံး Instant Messaging & လူမှုကွန်ယက် Apps ။ သင့်ရဲ့အကောင့်ကွဲပြားခြားနားသောမိတျဆှေစက်ဝိုင်း (အလုပ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး) ချိတ်ဆက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်များအားမျှဝေ, တစက်ပေါ်ရှိတစ်ပြိုင်နက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ Google ကနှစ်ခုဂိမ်းအကောင့်ကို log in Play နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအကောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများကို! ထိပ်တန်းဂိမ်း 99% ထောက်ခံ!
- ရိုးရှင်းသောနှင့်သန့်ရှင်းသော UI ကိုရိုးရှင်းစစ်ဆင်ရေး။
- အမျိုးမျိုး Acounts, တူအင်္ဂါရပ်များ, သီးခြား Space ကိုမပဋိပက္ခ!
- အသေးစားနှင့်အနိမျ့ CPU ကိုစားသုံးကြသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကို 5-ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးပါ!
သင်သည်မည်သည့်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးအခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး! ကျနော်တို့ (shexcelliance@gmail.com) သင့် feedbacks မျှော်လင့်နေကြသည်။
အကွိမျမြားစှာ Accounts ကို - 2Accounts
WhatsApp ကိုစတင်များ 1.Fix ပျက်ကွက်ခြင်း,
2.Support အန်းဒရွိုက်9Pie;
ဖနွမ်းပင်မြို့၌၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းအပေါ် 4.Fix ပျက်ကျမှုကိစ္စ;
လိုင်းပေါ်မှာရှိသမျှတစ်ချိန်တည်းမှာ, etc, ဒုတိယ, တတိယ, စတုတ္ထအကောင့်, ဆိုလိုသည်မှာမျိုးစုံအကောင့် 5.Support;
6.Support app ကို-သော့ခတ်အင်္ဂါရပ်;
ပုဂ္ဂလိက app ကိုအင်္ဂါရပ် 7.Support;
အန်းဒရွိုက်အို (အထကျ 8 နှင့်) တွင် 8.0.Support Shortcut ကို;
တချို့က Crash ကိစ္စများ 9.Fix;
အကွိမျမြားစှာ Accounts ကို: စင်ပြိုင် App ကို
6.33 ကို MB
2Face-2 Accounts ကို ...